IMacaroni kunye nesosi yelizwe | Ukupheka kweKhitshi
IMacaroni kunye nesosi yelizwe
UCarmen Guillen | | IPasta, Izitya, I-Salsas
Ukubhenela ekuphekeni ipasta xa sinethuba elifutshane yeyona nto kulula ukuyenza xa kufikwa ekutyeni into emnandi, elula nekhawulezayo. Nangona kunjalo, ukwenza ipasta ibe nencasa kwaye yahluke kwezinye ipasta, kuya kufuneka usonge isosi etyebileyo. Senze into efanayo ekhaya kule mpelaveki iphelileyo: yenza isosi eyahlukileyo. Imalunga nemacaroni kunye nesosi yelizwe.
Ukuba awufuni kuphoswa yile nto yenziwe yile sauce ityebileyo, funda oku kulandelayo kwinqaku. Iya kujongeka intle kuwe!
IMacaroni enesosi esimnandi kunokuba yinto elula kwaye ekhawulezayo kunye neresiphi epheleleyo kwaye emnandi kakhulu.
Iigram ezingama-300 zamafutha macaroni
Iigram ezingama-120 zamakhowa
I-400 ml yekrimu engamanzi
Iigram ezingama-75 zeetyhubhu ze-ham
Ngembiza enamanzi abilayo kunye neoyile encinci, siza kupheka imacaroni amafutha. Njengoko zininzi ii-macaroons, kuya kufuneka sizishiye imizuzu embalwa ubude kune-macaroni yesiqhelo.
Ngelixa ezi zibilayo, siza kwenza ngepani isosi yelizwe. Into yokuqala iya kuba kukuthatha igalikhi kwizilayi ezibhityileyo. Xa ezi ziqala ukumdaka, siza kudibanisa amakhowa usike nakwizilayi kwaye ucocwe kakuhle.
Makupheke ubushushu obuphakathi kangangemizuzu eli-10, kwaye emva koko yongeza Jamon. Sivuselela kakuhle ukuze iincasa ziqale ukudibanisa, kwaye oku kulandelayo kuya kuba yongeza ukhilimu kunye noshizi ogayiweyo. Gcoba kakuhle de i-sauce ikhule kwaye xa ifumana ukuthungwa okufunwayo, sibeka bucala.
Nje ukuba i-macaroni ibile kwaye i-dente, susa emlilweni, susa amanzi, uhlambe ngamanzi abandayo kwaye usete ipleyiti nganye ecaleni.
Siza kukhonza isosi ephezulu njengoko kubonisiwe kumfanekiso ... Ukutya!
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » IPasta » IMacaroni kunye nesosi yelizwe
Ibhanana, ikofu kunye neerum sorbet